Huawei Y5 Lite: famaritana, vidiny ary fanombohana | Androidsis
Huawei Y5 Lite: smartphone vaovao Android Go an'ny marika
Android Go dia nalaza teo amin'ny tsenan'ny telefaona. Ity kinova an'ny rafitra fandidiana ity niresaka taminao izahay indraindray, Nanjary safidy malaza be ho an'ny modely ambany izy io. Misy telefaona vaovao manampy an'io. Ity no Huawey Y5 Lite. Io no telefaona faharoa avy amin'ny mpanamboatra sinoa mampiasa ity kinova amin'ny rafitra fiasa ity.
Amin'ity tranga ity, Ity Huawei Y5 Lite ity dia fandrosoana lehibe ho an'ny mpanamboatra manoloana ny maodely voalohany natolotr'izy ireo. Drafitra ankehitriny kokoa, ankoatry ny fanamarihana tsara kokoa. Mamela antsika modely amin'ny fidirana izy ireo, saingy tsy dia fototra loatra izany.
Amin'izany fomba izany no ahitantsika ny fomba Android Go dia tohanan'ny mpanamboatra sasany lehibe indrindra amin'ny Android, toa ny Huawei sy Samsung, izay nandefa ny maodeliny volana vitsivitsy lasa izay. Lafin-javatra iray manohy manintona ny saina ny modely miaraka amin'ny Android Oreo Go. Mahamenatra, satria misy Android Pie koa ho an'ireo maodely ireo.
1 Famaritana Huawei Y5 Lite
Famaritana Huawei Y5 Lite
Mikasika ny haavo teknika, ity Huawei Y5 Lite dia maodely iray mahatratra ny laharam-pidirana avy amin'ny mpanamboatra sinoa. Tsy misy zavatra ampoizina miandry antsika, fa mahita ny fandrosoany amin'izy ireo isika amin'ity lafiny ity. Ary koa, ny fisian'ny Android Go dia manome traikefa ho an'ny mpampiasa tsara kokoa. Ireto avy ireo antsipirihany feno:
efijery: LCD TFT 5.45-inch miaraka amina vahaolana 1440 x 720 (295 ppi)
Fakan-tsary Rear: MP 8 miaraka amin'ny vava f / 2.0
Fakan-tsary eo aloha: MP 5 miaraka amin'ny vava f / 2.2
Conectividad: 4G, LTE, Bluetooth 4.2, microUSB, GLONASS, AGPS, Wi-Fi 802.11
Rafitra fandidiana: Android Oreo Go Edition
lafiny: 146.5 x 70.9 x 8.3 mm
lanja: 142 grama
Ny olana hitantsika matetika amin'ny telefaona Android Go dia ireo mpanamboatra Miloka amin'ny famaritana tsotra indrindra izy ireo, ho toy ny fomba hampihenana ny vidiny. Zavatra izay amin'ny tranga maro dia miafara amin'ny telefaona tsy misy famaritana mahalana na voafetra loatra. Izy io dia zavatra izay azo zahana amin'ny kely kokoa amin'ity Huawei Y5 Lite ity.
Ity dia zavatra iray izay efa hitantsika tamin'ny famolavolana telefaona, zavatra vaovao kokoa, ankoatry ny fampisehoana tabilao avo lenta kokoa ary miaraka amina vahaolana tsara kokoa. Amin'izay hitantsika fa noheverin'ilay mpanamboatra io lafiny io ho zava-dehibe kokoa. Miloka amin'ny efijery izy ireo miaraka amin'ny tahan'ny 18: 9 ary azo ekena ny sisiny.
Ity Huawei Y5 Lite dia manaraka amin'ny resaka fitehirizana, miaraka amin'ny 16 GB, izay azontsika itarina amin'ny microSD. Vaovao tsara ho an'ny mpampiasa, satria ny maodely hafa misy Android Go indraindray tonga miaraka amin'ny fitehirizana 8 GB, izay tena tsy manome ny mpampiasa fahafaha-manao betsaka. Amin'ity tranga ity, misy fahalalahana kely kokoa ho an'ny mpampiasa raha ny amin'ny fisintomana fampiharana na ny fananana rakitra voatahiry amin'ny telefaona.
Ho an'ny ambiny, tsy misy tsy ampoizina be loatra amin'ny fakan-tsary fakan-tsary, maotina. Ny bateria amin'ity tranga ity dia 3.020 mAh, izay mahazendana ny habeny. Ny zavatra mahazatra dia ny maodelin'ity karazana ity dia kely kokoa izy ireo. Saingy mampanantena ny hanome ny mpampiasa fizakantena ampy amin'ny fampiasana isan'andro ny telefaona.
Ny fanontaniana lehibe dia ny hametrahana na tsia an'ity Huawei Y5 Lite ity eny an-tsena any Eropa. Ny telefaona Android Go voalohany avy amin'ny marika sinoa dia tsy natomboka tany Eropa. Afaka vidiana any Azia sy Afrika izy io, fa tsy amin'ny toeran-kafa. Noho izany, tena azo inoana fa haverina miaraka amin'ity modely ity ny toe-javatra. Na dia amin'izao fotoana izao aza tsy misy fanamafisana momba an'io.
Ny Huawei Y5 Lite dia efa natolotra tao Pakistan, izay hahatongavany miaraka amin'ny vidiny 16.500 103 ropia (eo amin'ny XNUMX Euros novaina). Navoaka tamin'ny loko roa (mainty sy manga) izy io. Saingy, tsy maintsy miandry kely kokoa isika vao hahalala raha farany na nalefa tamin'ny tsena vaovao ity modely miaraka amin'ny Android Go an'ny marika sinoa ity. Azo antoka fa eo amin'ny tsena any Azia dia afaka mividy ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Y5 Lite: smartphone vaovao Android Go an'ny marika
UMIDIGI F1: Ny sainan'ny marika vaovao
Xiaomi dia hanolotra maodely vaovao amin'ny faritra Redmi amin'ny 10 Janoary